Savate boxe française: «Nampanantena tsy nisy ny federasiona», hoy ny ligin’Analamanga | NewsMada
Savate boxe française: «Nampanantena tsy nisy ny federasiona», hoy ny ligin’Analamanga
Manoloana ny tsy fisian’ny hetsika ataon’ny federasiona malagasin’ny savate boxe française, namaky bantsilana ny tsy fahombiazany, ny filohan’ny ligin’Analamanga, tarihin-dRandrianasolo Haritina.
Mandalo fotoan-tsarotra ny haiady savate boxe française, amin’izao fotoana izao ka manao antso ho an’ireo atleta avo lenta sy ireo efa nisalotra ny ho tompondaka eran-tany na Afrika na ranomasimbe indianina, ny filohan’ny ligin’Analamanga, Randrianasolo Haritina, hifanome tanana, hitady vahaolana mahomby, hanavotana ity taranja ity.
Antsoiny ihany koa ireo teknisianina rehetra, hitondra ny traikefany. «Tsy afaka ny hangina intsony izahay, eto anivon’ny ligin’Analamanga, amin’ny savate boxe française, manoloana ny zava-misy, ataon’ny federasiona», hoy i Haritina. Notsiahiviny fa tsy nisy tanteraka, ny 90 isan-jaton’ireo fampanantenana nataon’ny filohan’ny federasiona, tamin’izy vao nandray ny fitantanana, izay nanambara fa hampakatra avo sy hitondra ambony ity taranja haiady ity, na eo anivon’ny ranomasimbe indianina, na Afrika eny fa hatrany amin’ny ho tompondaka eran-tany, mihitsy.
Nanao toky fitaka
Nandiso fanantenana ireo ligy sy ny atleta ny tenany, satria tsy tanteraka ireo toky, nataony ny amin’ny hamatsiana fitaovana sy fanomezana asa ireo atleta avo lenta ary ny fijerena manokana ireo mpanazatra nasionaly. «Nahavariana anay, ary tena nahagaga ny filazan’ny filohan’ny federasiona fa nisy volabe natontona tamin’ity taranja ity. Natao inona izany volabe izany, fa tsy tonga taty aminay ligy sy ireo atleta, akory”, araka ny nambaran’i Haritina, hatrany.
Tsy mahagaga, araka ny nolazain’ny filohan’ny ligin’Analamanga, raha toa ka lasa nifindra any amin’ny haiady hafa ny mpanao boxe savate, satria kivy sy diso fanantenana, tamin’ny nataon’ny federasiona. Tsy nisy ny fandraisana anjara teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, na dia efa nisy aza ny fampivondronana intelo, natao fa nionona tamin’ny famitana ny fifaninanam-pirenena, fotsiny. Manoloana izany, mitaky olom-baovao vonona hanandratra avo sy hamerina ny lazany fahiny, ny tontolon’ny savate boxe française.